ဤရွေ့ကားအစစ်အမှန်အသက်တာ၌မပြည့်စုံမရနိုငျသောစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ကြသည်။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ေဝးေဝးေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီးအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၾကသည္။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်မတည်ရှိပါဘူးတစ်ခုခုကိုအပ်ချင်သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာဟေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလိင်ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်တယ်။ ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲနဲ႔ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲနဲ႔ျမန္မာအိုင္ေဒါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲတို႔ကိုဒီကေန႔မွာသြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။, ဂိမ်းများ၏ဤမျိုးဆက်သစ်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်၏ခြုံငုံပြည်နယ်,ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်နှင့်ကစားသမားလိင်ကျော်ထိန်းချုပ်မှုတွေအများကြီးပေးသည်နှင့်သူတို့ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအခြားဂိမ်းဒြပ်စင်တိုးတက်ခဲ့ကြသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ သူတို့ကသင်ရှိသည်အံ့သောငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ကစားနိုင်ပါတယ်,အိုင်အက်စ်နှင့်အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပါအဝင်. နှင့်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စာမျက်နှာမှတဆင့်သင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်းတောင်းဆိုမှုများ၏နာမကိုအမှီအဖြစ်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ဤမှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သင်ဒေါသအမျက်ထွက်သည်အထိနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေနှင့်အတူသင်ဗုံးလိမ့်မည်အခမဲ့၏ကြင်နာမဟုတ်ပါဘူး-ပလက်ဖောင်းဆေးလိပ်ဖြတ်။ ဤသည်ပူးတွဲပါအဘယ်သူမျှမကြိုးနှင့်အတူအခမဲ့၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕နဲ႔ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲျပဳလုပ္သူေတြရဲ႕ေၾကာ္ျငာေတြကိုဝက္ဘ္ဆိုက္မွာေတြ႕ရပါတယ္။ သို့သော်ဤကြော်ငြာများအဘယ်သူအားမျှသင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံ၏လမ်း၌ရလိမ့်မည်။ သင်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကြော်ငြာသောအရာကိုစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်,သင်ပင်သူတို့ကိုသတိထားမိမည်မဟုတ်.
ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမျိုးနှင့်အတူလူတိုင်းကြိုဆိုကြောင်းအမာခံလိင်ဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောညစ်ညမ်းဂိမ်းဆိုဒ်များအပေါ်စစ်တမ်းတစ်ခုအောင်အားဖြင့်ပြု၏,ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့လိင်ပြွန်ပေါ်. အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှာဖွေအမျိုးသားများစိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့လိုအပ်သောအမျိုးအစားများ၏အဆုံးစွန်စာရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ဆိုက်မှာအခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းတွေနဲ့အဲဒီအမျိုးအစားတွေကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ သငျသညျဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကနေပျော့ညစ်ညမ်းဂိမ်းမှအရာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်တော်လိင်ဂိမ်းများ,တဦးတည်းအရေးယူအပေါ်တဦးတည်း,နှစ်ဦးစလုံး၏သုံးခုနှင့်ပင်သို့မဟုတ်ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံဂိမ်းရှိသည်။, ဒီဆိုဒ်မှာဂိမ်းအချို့ကိုသင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်,သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်စံပြကစားစရာဖန်တီးနိုင်အောင်. အခြားဂိမ်းသင်သည်သင်၏ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်စွတ်ဖါးသို့လှည့်ကာတွန်းနှင့်ကာတွန်းကနေဇာတ်ကောင်ကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်ရုပ်ပြောင်အရေးယူမှုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းဒီနေရာမှာအချို့သောဖော့စဖရပ်ဂိမ်းများ,အချို့ကိုသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ယင်းကိုအပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း,အခြားသူများကိုမုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍသို့နေသောသူတို့အဘို့ပင်အချို့အစွန်းရောက်သူတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်ကစား.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်လိမ့်မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အားလုံးလက်တွေ့ကျကျလိင်အတွေ့အကြုံများနှင့်ရာထူးနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းပါလျှင်,ကစားစရာများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်သွားသင့်. ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ပိုကောင်းသင့်တော်မယ့်လိင်ဂိမ်း၏အမျိုးအစားကိုသင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လည်းစေ့စပ်သင်စောင့်ရှောက်မည်တဲ့ပုံပြင်လိုင်းရလိမ့်မည်ဘယ်မှာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။, တဖန်သင်တို့ရိုင်းလိင်စွန့်စား၏ပုံပြင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်သိမ်းရွေးချယ်ရာတွင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အပြန်အလှန်လိင်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူတစ်ခုလုံးအသစ်ကလမ်းအတွက်အဲလစ်ဇဘက်စာပေပျော်မွေ့မည်သည့်အတွက်စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းရှိသည်။
ကျနော်တို့ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုလူတွေကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအလေ့အထအများပြည်သူသွားစေခြင်းငှါစိုးရိမ်နေကြသည်ကိုငါသိ၏,ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘယ်သူမျှမသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်ဘယ်သူသိကြလိမ့်မည်ဟုသေချာအောင်တတ်နိုင်သမျှအပေါငျးတို့သအစီအမံကိုယူ။ သင့်ရဲ့အိုင်ပီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်မှာမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်ကျနော်တို့မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာမှဆက်သွယ်မှုကိုတောင်းဘယ်တော့မှတစ်ဦးမူဝါဒရှိသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဤဂိမ်းကစားသင့်ရဲ့ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီးအားဖြင့်ဖမ်းမိမရကြဘူးအဖြစ်,အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိကြ၏သိပါလိမ့်မယ်။